XBox Otu X: enwere site na Nọvemba 7 ruo 499,99 euro | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | Ndi Consolas
E gosipụtara ihe ngosi Microsoft ọhụrụ n'oge mmeghe nke ihe omume Gamescon. E wezụga inwe ezigbo mma mma, ihe ọhụrụ Xbox One X njikwa ga-ejigide aha koodu ahụ enyerela ọrụ ahụ. Ma ọ bụ na 'Project Scorpio' bụ nomenclature ha ga - ewepụta arụmọrụ.
A na-echekwa ihe njikwa Microsoft ọzọ site na ịntanetị na ahịa dị iche iche. A dụrụ gị ọdụ na ndị ọrụ ga-amalite ịnata ya n'ụlọ ha site na November 7 na-esote. Site na njikwa a, Microsoft chọrọ ịkwado Sony na PlayStation 4 Pro ya na nkenke, nkasi obi abụọ kachasị ewu ewu n'oge a.
Na Xbox One X, onye ọrụ ga-enwe n'aka ha a n'ezie dị ike console na graphic akwụkwọ. Ọ nwere GPU na 6 Teraflops nke ike na-a fluidụ ọmụmụ ọdịnaya ke 4k mkpebi. Ọ bụrụ na anyị echee ike a na Sony ọzọ, anyị na-ahụ na PlayStation 4 Pro ruru 4,2 Teraflops. Kpachara anya, n'ihi na adọọlarị ndị na-azụ ahịa aka na ntị na ike a niile agaghị egosi oke ọkụ nke Xbox One X. Ọ nwere sistemụ jụrụ oyi dị elu.
N'otu aka ahụ, Microsoft mere ka o doo anya na Ngwunye ọhụrụ a dakọtara na ngwa ngwa niile dị maka akara Xbox One. Nke ahụ bụ, ị gaghị achọ ụdị nkwụnye ma ọ bụ ihe ọhụụ dị iche iji mee ka ha rụọ ọrụ. Na mgbakwunye, ha na-ekwukwa banyere ndakọrịta na egwuregwu ochie n'elu ikpo okwu.
N'aka nke ọzọ, Xbox One X chọrọ ilekwasị anya na ọdịnaya 4K - eriri HDMI kwekọrọ na mkpebi a so na ngwugwu ahịa. Otú ọ dị, Anyị amachaghị ma ụlọ ọrụ ahụ na-eburu n'uche etu ahịa TV 4K si dị na etu esi anabata ya. Ọzọkwa, yana Xbox One X, a mara ọkwa ọkwa ọhụrụ maka izu ndị na-abịanụ. Offọdụ n'ime ha ga-abụ: Assasin si n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ, Forza 7, crackdown 3, n'etiti ndị ọzọ.
Dịka anyị kwuru na mbido, Xobox One X dị maka ndoputa. Na A ga-amalite ịnata ya na November 7. Pricegwọ nke njikwa bụ 499,99 euro; nke ahụ bụ, 100 euro karịa ihe Sony ọzọ na-akwụ ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ndi Consolas » XBox One X: dị site na Nọvemba 7 na 499,99 euro
Ndị a bụ akụkọ banyere Firmware 5.0 maka PlayStation 4